CATL က ဘီ အမ် ဒဗ လျူ ကား သစ် အတွက် ဆလင်ဒါ ပုံစံ ဘက်ထရီ များ ထောက်ပံ့ ပေးမည် - Pandaily
CATL က ဘီ အမ် ဒဗ လျူ ကား သစ် အတွက် ဆလင်ဒါ ပုံစံ ဘက်ထရီ များ ထောက်ပံ့ ပေးမည်
May 31, 2022, 11:40မနက် 2022/05/31 14:16:53 Pandaily
တရုတ် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီကြီး Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်မှစ၍ BMW အား လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် အသစ် များအား ထောက်ပံ့ ရန် ဆလင်ဒါ ဘက်ထရီ များ ကိုထောက်ပံ့ပေး မည်ဖြစ်သည်။Cailian ထုတ်ဝ ေရေး အိမ်ဒီ ကိစၤ နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေမလ ၂၇ ရက္ေနႛက သတင္းေပး ပိုႛ
Tesla သည်၎င်း၏ ဗိသုကာ အသစ် တွင် cylindrical batteries များ အသုံးပြုမှုကို ကြေငြာ ပြီးနောက် အစောပိုင်းက BMW သည် ၂၀ ၂၅ ခုနှစ်တွင် Neue KlaSSe ပလက်ဖောင်း ကို အခြေခံ၍ မော်ဒယ် များတွင် cylindrical batteries များကိုအသုံးပြု ရန်စီစဉ် ခဲ့သည်။
CATL သည် BMW အတွက် Prism Battery အစား Cylindrical Battery ကိုထောက်ပံ့ ပေးလိမ့်မည်။ ဒီ အေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ ဘီ အမ္ ဒဗလ်ဴ ရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း သက္သာ သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆလင္ ဒါ ဘတ္ ထရီ ေတြ ေစ်း သက္သာ သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သတင္းရင္းျမစ္ ေတြက ဆုိပါတယ္။
အထွေထွေ ဘက်ထရီ များသည် ဘက်ထရီ ၏ စျေးနှုန်း ၏ ၅ ပုံ ၄ ပုံ ရှိသည်။ နည်းပညာ ရင့်ကျက် လာသည်နှင့်အမျှ ကုန်ကျစရိတ် သည်တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်း သွားလိမ့်မည်။ သို့သော် မကြာသေးမီက lithium နှင့် nickel ကဲ့သို့သော ကုန်ကြမ်း ဈေးနှုန်း များ စံချိန်တင် မြင့်တက် မှုကြောင့် ဘက်ထရီ ကုန်ကျစရိတ် များ ဆက်လက် မြင့်တက် နေသည်။ BMW သည် ဘက်ထရီ ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချ ခြင်းအားဖြင့် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ၏ အမြတ်အစွန်း ကို လောင်စာဆီ ယာဉ် များနှင့် တန်းတူ ဖြစ်စေရန် ရည်မှန်းချက် အောင်မြင် ရန်မျှော်လင့် သည်။
မကြာသေးမီက CATL သည်၎င်း၏ CTP 3.0 အခြေပြု Kirin ဘက်ထရီ ကို ရရှိနိုင် ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Tesla အသုံးပြုသော 4680 columnar battery နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက စွမ်းအင် သိပ်သည်းဆ ကို တူညီသော အခြေအနေများတွင် ၁၃% တိုး နိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် သည် BMW သည် CATL ကိုဆက်လက် ရွေးချယ် ရသည့် အရေးကြီးသော အကြောင်းရင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
BMW သည် CATL နှင့် ပထမဆုံး အလုပ်လုပ် သောကား ထုတ်လုပ်သူ များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် အသစ် တည်ထောင် ထားသော CATL သည် BMW Brilliance ၏ပထမဆုံး လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် Zinoro 1e အတွက် ဘက်ထရီ စနစ် ကိုထောက်ပံ့ ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် BMW သည် ternary lithium batteries များအတွက် CATL နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင် BMW သည် CATL နှင့် ဝယ်ယူ ရေး သဘောတူညီချက် အသစ်ကို ချုပ်ဆို ခဲ့ပြီး ဘက်ထရီ အမှာစာ များသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ယူရို ၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄. ၃၀ ဘီလီယံ) မှ ယူရို ၇. ၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၇. ၈၄ ဘီလီယံ) သို့ ၂၀၂၀ မှ ၂၀ ၃၁ အထိ စာချုပ် သက်တမ်း တိုးခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:CATL ကုမၸဏီႏွင့္ ဥေရာပ လွ်ပ္စစ္ ဘတ္စ္ကား ကုမၸဏီ Solaris တို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိ
CATL သည် BMW နှင့် ၁၀ နှစ်ကျော် အလုပ်လုပ် ခဲ့သော်လည်း ၎င်း ၏အကြီးဆုံး ဖောက်သည် မှာ တက် စ လာ ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ CATL ၏ Tesla သို့ နှစ်စဉ် စုစုပေါင်း ဘက်ထရီ ရောင်းအား သည်ယွမ် ၁၃. ၀၄ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁. ၉၅ ဘီလီယံ) ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် ရောင်းအား ၏ ၁၀% နှင့်စွမ်းအင် ဘက်ထရီ စနစ်၏ ၀ င်ငွေ၏ ၁၄% ခန့်ရှိသည်။